नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको साधारण सभा असोज १६ गते, हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव
भदौ २६, काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको १८औं वार्षिक साधारण सभा असोज १६ गते स्टार ब्याङक्वेट रत्ननगर, चितवनमा दिउँसो १ बजे हुने भएको छ ।
कम्पनीको भदौ २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । साधारण सभाले चुक्तापूँजी वृद्धि गर्नको लागि शत प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ‘ख’ वर्गको जिल्ला स्तरीय बैंकलाई न्यूनतम पूँजी रू. ५० करोड आवश्यक पर्ने भएकाले कम्पनीको अधिकृत जारी र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने र सोही अनुसार प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।
साथै यस नारायणी डेभलपमेण्ट बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसँग सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गर्ने रहेको छ ।
साधारण सभा प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता पुस्तिका असोज ८ गतेदेखि १६ गतेसम्म बन्द रहने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । असोज ७ गतेसम्म कायम शेयरधनीले साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन् ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ६ करोड ५६ लाख रहेको छ । शत प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरेपछि कम्पनीको पूँजी रू. १३ करोड १२ लाख पुग्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस कम्पनीलाई समस्याग्रस्त सूचीबाट साउन ८ गते फुकुवा गरेको हो ।